HAMBALYO FRANCE: Xulka France Oo Dhegaha Ka Garaacday Xulka Croatia, Kuna Guuleystay Koobka Adduunka | JAALENEWS
HAMBALYO FRANCE: Xulka France Oo Dhegaha Ka Garaacday Xulka Croatia, Kuna Guuleystay Koobka Adduunka
Published on July 15, 2018 by Mido · No Comments
Goolal ay dhaliyeen Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann & gool uu iska dhaliyay Mario Mandzukic ayaa natiijo qurux badan siiyay xulka France, waxeyna taasi ka dhigan tahay in xulka Les Bleus ay markii labaad ku guuleysteen koobka Adduunka.
Croatia wey soo dadaaleen, laba gool ayey la yimaadeen oo ay ka heleen Ivan Perisic iyo Mandzukic – balse gurigooda waxey ku laabanayaan ayagoo madaxooda hoos yahay maadaama ay guuldaro ku dhacday.
Kulanka wuxuu ku bilowday si xamaasad leh iyadoo wiilasha Croatia ay u muuqdeen kuwa aad uga fiican bilowga maadaama ay dhawr jeer cadaadis saareen goolka France, tobankii daqiiqo ee ugu horreeyay waxey tageen goolka kale tiro ka badan saddex jeer taasoo ka dhigan iney aad uga fiicnaayeen dhigooda.
Daqiiqadii 18-aad: Mardio Mandzukic ayaa gooshiisa ku leexiyay kuabd uu geesta kasoo qaada Antoine Griezmann, goolhaye Subasic ayaa awoodi waayay inuu saaxiibkiis ceebta ka dhawro bale nasiib xumo uma noqon .
Daqiiqadii 28-aad: Ivan Perisic ayaa asturay ceebta saaxiibkiisa, kubad laba xiddig ay madax ku dhufteen kadib ayaa u timid Vida kaas oo tartiib u caawiyay Ivan, xiddiga Inter Milan si qurux badan ayuu kubada uga dheereystay Kante ka hor inta uusan lugta bidix kubad awood leh ku daba marsiin Hugo Lloris.
Daqiiqadii 39-aad: Antoine Griezmann ayaa shabaqa soo taabtay kaas oo dhaliyay goolka labaad ee ciyaarta, xiddiga Atletico Madrid dhinac qaldan ayuu u diray goolhaye Subasic waana rigoradii saddexaad oo uu dhaliyo xiddigaan mudada tartanka.
Daqiiqadii 59-aad: Paul Pogba ayaa shabaqa soo taabtay markii uu si qurux badan lugta bidix kubad ku daba mariyay Subasic, Kylian Mbappe ayaa markii hore soo abuuray halka Paul ay mar ka qaldantay walow uu markii dambe saxay.
Daqiiqadii 65-aad: Kylian Mbappe ayaa shabaqa soo taabtay kadib markii uu meel ka baxsan xerada garoonka, goolhaye Subasic ayaa awoodi waayay inuu qabto kubad adag oo ka timid da’yarka ugu fiican waqtigaan dunida.
Daqiiqadii 69-aad: Mario Mandzukic ayaa helay hadiyad fiican markii Hugo Lloris uu damcay inuu falaado isagoo gooshiisa hor jooga, si dhibyar ayuuna shabaqa ugu aadiyay xiddiga ka tirsan Juventus.
Croatia ayaa sameysay dadaal aan caadi aheyn, balse uma suuragalin iney gool ka helaan, natiijada ayaa noqotay in Faransiiska inuu ku guuleysto 4-2.a
Xulka Les Bleus ayaana hantay koobka Adduunka, waana markii labaad oo ay sidaas sameeyaan, waxaa la xasuustaa in 1998 ay ku guuleysteen waqtigii gurigooda.